Kedu ihe bụ SPAM? | ECommerce ozi ọma
Kedu ihe bụ SPAM?
Jose Ignacio | | Marketing, Ahịa ahịa
Onye na-anụbeghị echiche a na mgbasa ozi dijitalụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ ọ bụla na-anọghị na njikọ okwu a. N'ihi na dị ka a pụrụ isi kwuo ya, SPAM bụ echiche jikọtara na okwu junk mail, ozi a na-achọghị na ozi junk na nke na-ezo aka na ozi achọghị, ozi achọghị ma ọ bụ ozi na onye na-amaghị onye zitere ya. A na-eziga klas nke mgbasa ozi a n'ọtụtụ buru ibu nke na-emerụ nnata ozi n'otu ụzọ ma ọ bụ karịa.
Ndị a bụ ozi ịntanetị nwere ike imebi ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahọrọ ụdị nnyefe a. N'ime ihe ndị ọzọ n'ihi na ha ga-enwe ọchịchọ na-abụghị nke ndị ọrụ ma dị oke egwu ebe ọ bụ na ha nwere ike kagbuo mkpọsa mgbasa ozi ọ bụla ma obu ihe omuma. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka ihe ọ bụla zuru oke, ị ga-etinyerịrị akụ niile ka ozi ịntanetị gị ghara ịghọ ozi junk, ozi ị na-achọghị na ozi junk. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ị ga-ezere ihe karịrị otu nsogbu site ugbu a gaa n'ihu.
Ọzọ nke na-agbagọkwa ọcha nke junk mail, unsolicited mail na spam bụ onye nwere na-eme ha enwekwu mmetụta. N’echiche na ha nwere ike mepụta ọtụtụ nsogbu karịa ka ị na-eche site na mbido. Karịsịa mgbe akụkụ a jikọtara ya na ọrụ nke azụmahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ebee ka inwere ike ịtụghari atụmatụ ọkachamara gị n’ihe. Site na usoro nke enwere ike ibido site na uzo a na ahia dijitalụ.
1 Mmetụta nke SPAM maka ọdịmma nke azụmahịa kọmputa gị
2 Mmetụta nke spam na e-commerce gị
3 Kedu nsogbu ụdị ozi ịntanetị a nwere ike ịmepụta na ụlọ ahịa dijitalụ gị?
4 Ọgwụgwọ akọwapụtara nke ọma n'oge niile
Mmetụta nke SPAM maka ọdịmma nke azụmahịa kọmputa gị
N'ezie ọ nwere ọtụtụ n'ụdị dị iche iche dịka ị ga-ahụ site ugbu a gawa. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, a na-eji spam eme ihe gbasaa ozi dị nnọọ ngwa ngwa na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ na-enweghị mkpa maka ihu ọma ha ịnata ozi a na-ebufe.
Ihe mmebi nke spam na-akpata nwere ike ịgụta ọnụ ọgụgụ akụ na ụba n'ọtụtụ oge ọrụ na-efu kwa ụbọchị. Nke a bụ otu akụkụ nke ị kwesịrị izere n'ọnọdụ ọ bụla. Ọbụghị naanị maka ego enwere ike ikwenye, mana maka usoro nke ha ga - ahụ ka ị mikpuru onwe gị site n'oge ndị a.
Mmebi na sistemụ arụmọrụ
Ọbụghị naanị akụkụ ego kwesịrị ka eji ya kpọrọ ihe site na echiche nke spam ma ọ bụ spam. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na ntụle, eziokwu na ụdị azụmahịa a pụrụ iche nwere ike ịnwe nje ma ọ bụ koodu ọjọọ ndị ọzọ na-ekerekwa oke. Ruo n'ókè ha nwere ike ibunye sistemụ arụmọrụ gị na kọmputa gị. Site na mmebi nke ị nwere ike ịmepụta na faịlụ, akwụkwọ ma ọ bụ ndepụta nke ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ. Ruo n'ókè ọ nwere ike imetụta mmepe azụmahịa gị dijitalụ n'onwe ya.
Informationgbọ ala ozi wayo
Obi abụọ adịghị ya na spam nwekwara ike ịbụ akụrụngwa maka arụmọrụ, dị ka ịme ka njirimara gị, nweta data nke onye ọrụ ma ọ bụ naanị iji rụọ ọrụ aghụghọ ndị ọzọ. Ga-akpachara anya ka ị ghara ịhụ onwe gị n'okwu ndị ọzọ metụtara njirimara ndị a na o doro anya na ị nwere ike imerụ mmasị ọkachamara gị site n'oge ahụ.
Amachi ikike nchekwa
Ihe ọzọ dị mkpa nke omume ndị a dabere na ihe dịka ọ bụ na ị nwere ike ịhụ onwe gị oke na oghere nke teknụzụ gị. N'ụzọ adịghị mkpa na nke ahụ nwekwara ike ịkọ akụkọ karịrị otu nsogbu site ugbu a gaa n'ihu yana na ị nwere ike ịhapụ mmekọrịta gị na ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị n'oge ọ bụla. Ekwela akụ na ụdị azụmaahịa a na - eduga na ebe dị mma.
Mmetụta nke spam na e-commerce gị
Agbanyeghị, mgbe ị nwetara spam (ozi junk) na ala nke ibe ahụ enwere njikọ nke nwere ike ịnye gị nhọrọ nke ịghara ịnata ụdị ozi ahụ ọzọ. Ọ bụrụ otu a, ọ dị mfe ịchọpụta adresị nke ozi-e ndị a. Ya mere, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị jiri ya zere ọnọdụ ndị ị na-achọghị n'ezie. Na ihe dị njọ, na ha nwere ike imerụ ọdịmma ọkachamara gị, dịka ọ na-eme na omume ndị a anyị na-ekpughe gị n'okpuru.
Spam na-amanye gị itinye oge ziri ezi nke oge gị iji chọpụta spam ndị a ma ọ bụ hichapụ ha. Ruo n'ókè na ọ bụ ohere nke oge ị wepụrụ azụmahịa gị ma ọ bụ ọrụ ọkachamara na throughntanetị.
N'aka nke ọzọ, ịpụta ozi ịntanetị ndị a pụrụiche pụrụ ịmepụta ihe karịrị otu nsogbu mmekọrịta na ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ. N'ihi na ọ nwere ike ịmepụta nnyonye anya n'etiti ha na n'ụzọ ụfọdụ na-eme ka mmekọrịta azụmahịa ka njọ.
Ekwesighi inye ya obere njọ oyiyi banyere ụlọ ọrụ dijitalụ anyị na-anọchi anya ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị na Kama, anyị nwere ike inye a dịtụ-adasi mgbaàmà banyere nzukọ anyị. N’ezie, ọrụ anyị rụworo kemgbe ọtụtụ afọ ekwesighi itinye ndụ anyị n’ihe egwu.
Obi abụọ adịghị ya na ha nwere ike na-egbochi ozi ma ọ bụ ozi anyị zigara ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ. Ruo n'ókè ha nwere ike ileghara ọwa ndị anyị mepụtara iji jigide kọntaktị ziri ezi n'etiti akụkụ abụọ nke usoro ahụ.
O nwere ike ịbụ ruo ebe ahịa nke ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ihe anyị metụtara. N'ụzọ na-adịghị mkpa kpamkpam ma enwere ike izere ya n'ụzọ dị irè site na mmalite.
Mmasị n'ebe ụlọ ọrụ na-ezipụ spam ma ọ bụ ozi junk dị obere na akụkụ nke ndị ọrụ niile. Ọ nwere ike iru ebe anyị enweghị mmasị na ụdị ọdịnaya ọ bụla yana akụkụ a nwere mmetụta dị njọ na azụmaahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa dijitalụ.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe spam nwere ike inwe na azụmaahịa dijitalụ gị. Dị ka ị pụrụ ịhụ, e nwere ndị ọzọ ndapụta karịa ndị ibido hụrụ na gị n'ozuzu amụma.
Kedu nsogbu ụdị ozi ịntanetị a nwere ike ịmepụta na ụlọ ahịa dijitalụ gị?
Ọ bụ ezie na spam bụ nsogbu nye ndị mmadụ n'otu n'otu, ọ bụ karịa na ị na-ahụ maka azụmaahịa ịntanetị. N'echiche a, ị kwesịrị ịchọpụta ihe omume nwere ike ịpụta na ozi a na-akpọ SPAM. Dị ka omume anyị ga-ekpughere gị n'okpuru:
Ọnwụ nke arụpụtaghị ihe
Obi abụọ adịghị ya na ozi ịntanetị ndị a nwere ike ịbụ isi iyi nke nsogbu gị. Maka na ị nwere ike iwepụta oge iji gụọ ya mgbe ị na-enwe obi abụọ banyere ọdịdị ma ọ bụ mmalite ya yana na ị nwere ike ịrara ọrụ ndị ọzọ n'ime ọrụ ọkachamara gị.
Ọ bụ ezie na ị chebeghị maka akụkụ a, ọ bụ obere eziokwu na spam nwere ike imerụ ọdịmma ọkachamara gị ma ọ bụrụ na ịnye ozi dị otú ahụ ma ọ bụ mezuo ntuziaka nke ụdị e-mail aghụghọ a. Ruo n'ókè na n'ikpeazụ ha nwere ike ịdọrọ na ịzụlite azụmahịa gị. N'echiche a, ị kwesịrị ịkpachara anya mgbe otu n'ime ozi ndị a pụrụ iche pụtara.
Ma ị chọọ ya ma ị chọghị, ọ ga-apụta na mmefu ego ezinụlọ gị ga-efu gị karịa. N'ihi ụgwọ nke njikọ Internetntanetị, iji ngwaọrụ ọgbara ọhụrụ ma ọ bụ naanị n'ihi ịdabere na ya gabiga ókè nke nwere ike ibido na ndụ gị. Na nkenke, ịkwesighi ileda akụkụ a nke spam ma ọ bụ ihe efu.
Nata ọdịnaya na-ekwesịghị ekwesị maka ụlọ ahịa gị n'ịntanetị
Ma ọ bụ ị nwere ike ichefu ihe a nke nwere ike ọ gaghị ekpebi ịbanye na ọrụ gị n'etiti ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị. Ruo n'ókè na onye ọrụ ahụ nwere ike ịnata ozi na ọdịnaya na-ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ nke na-ewe iwe. Nke a enweghị ike isi n'akụkụ gị pụta ebe naanị ihe ị ga - eme bụ imebi ọrụ ọkachamara gị site na oge ndị a.
Ọgwụgwọ akọwapụtara nke ọma n'oge niile
N'ezie, ịkwesighi ịrara spam dị ka a ga - asị na ọ bụ egwuregwu. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na ntụle, ị kwesịrị ị na-agbalị nile iji kpochapụ ya. Echefula na ị nọ n'ihu azụmahịa nke gị n'ịntanetị na nke a chọrọ usoro ntinye aka nke ị na-agaghị eleghara anya. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ọdịda ọ bụla na nke a nwere ike ida gị ọkachamara ọdịda. Nke a bụ nke ahụ dị mfe, ma ọ bụrụ na ị ghọtaghị ya na njedebe ị ga-ahụ mmetụta ọjọọ niile nke arụmọrụ ndị a.
N’aka nke ọzọ, nke kachasị mma bụ na ịnwere ọtụtụ usoro nri ka ihe wee ghara ịka njọ. Nke a kwesịrị ịbụ otu ihe mgbaru ọsọ gị kachasị. Egbula ma ọ bụ n'oge ọ bụla n'ihi na ị ga-aza ajụjụ maka ihe nwere ike ime site ugbu a gaa n'ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Kedu ihe bụ SPAM?
Onyinyechi roux dijo
Achọtara m ya isiokwu na-adọrọ mmasị. Spam na-emetụta ma ndị ọrụ Internetntanetị ma azụmahịa dị n'ịntanetị na ndị nke ikpeazụ ga-akpachara anya na ahịa e-mail ha anaghị aghọ spam. Echere m na ọ bụghị naanị na ọnụọgụ ozi mgbasa ozi ha na-ezigara kama na ọdịnaya na ederede, mgbe ụfọdụ ọ na-abụ nke adịghị mma nke na ọ na-eme ka mmadụ jụọ mkpa azụmahịa ahụ dị. Echere m na ị ga-eme mmega ahụ mgbe niile ka anyị hụ ka anyị si ahụ onwe anyị dị ka azụmaahịa si n'èzí na otu ndị ahịa si ahụ anyị. Enwere m mmasị na edemede 🙂 ekele
Zaghachi Renard Roux
Ndụmọdụ maka ịmepụta atụmatụ ịzụ ahịa n'ịntanetị maka ecommerce
Etu ị ga - esi zụlite mmekọrịta mmekọrịta na eCommerce gị